वीरगञ्ज कारागारमा जेलर चक्रपाणीको चक्रव्यूह, रकमी दुनो सोझ्याउन कैदीसित गोप्य वार्तालाप !
गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeअन्तर्राष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रियवीरगञ्ज कारागारमा जेलर चक्रपाणीको चक्रव्यूह, रकमी दुनो सोझ्याउन कैदीसित गोप्य वार्तालाप !
Wednesday, 26 October 2016 15:34	Rate this item
वीरगञ्ज, कात्तिक, वीरगञ्ज कारागारका जेलर चक्रपाणी गौतमको मनोमानी र रुपैयाँ मोहका कारण बेथितिको चाङ लागेको छ । कारागार अस्तव्यस्त हुँदा कैदीबन्दीले सास्ती खेप्नु परेको छ । क्षमताको दुई गुणाभन्दा बढी कैदीबन्दी कोचेर राखिएको यो कारागारमा दैनिक प्रशासन सञ्चालनदेखि कैदीबन्दीलाई पूरा गरिदिनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकतामा पनि जेलर गौतमको कमिशन चक्करका कारण कारागार अस्तव्यस्त बन्दै गएको कारगारसम्बद्ध स्रोतले बतायो । नक्खु कारागार प्रशासनमा ३ वर्ष बिताएर त्यहाँबाट वीरगञ्ज कारागारका सरुवा मागेर आएका गौतमले विगत ५ महीनामा कारागार सुधारको कुनै पनि काम नगरेको तर, पाइलैपिच्छे कमिशन खोज्दा बेथिति भने बढ्दै गएको बताइएको छ । कारागारका भौतिक तथा आर्थिक स्रोतहरूको दुरुपयोग भइरहेको उनको रवैयाबाट पीडितहरूले बताउने गरेका छन् । आर्थिक लाभका लागि त्यहाँ कार्यरत अन्य निकायलाई समेत अनियमित दबाब दिने गरेको बुझिएको छ । जेलर गौतमले अहिले कारागार बाहिर राखिएका नाइकेहरूसित मोटो आर्थिक लाभ माग गरेकोमा कुरा नमिलेपछि अर्का एकजनालाई नाइके बनाएर बाहिर निकाल्ने योजना बनाएको बुझिएको छ । उनले जालीनोटको कारोबारमा सजाय काटिरहेका रामेश्वर सहनीलाई नयाँ नाइकेको रुपमा बाहिर निकालेर आर्थिक दुनो सोझ्याउने तानाबाना बुनेको स्रोतले जानकारी दियो । यही प्रपञ्चको कार्यान्वयनका लागि गौतमले मंगलबार सहनीलाई बोलाएर ढोकामा चुक्कुल लगाई लामो गोप्य वार्तालाप गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् । अहिले वीरगञ्ज कारागारमा ३ जना नाइकेलाई बाहिर निकालेर खटाइएको छ । सहनीलाई ३ महीना पहिला झुम्का कारगारबाट सरुवा गरेर यहाँ ल्याइएको हो । जेलर गौतमले भने कारागारको आवश्यकताअनुसार नाइके थपघट गर्न सकिने बताए । उनले आफूमाथि लगाइएका आरोप गलत भएको दाबीसमेत गरे । ‘यहाँ धेरैतिरको स्वार्थ बाझिदो रहेछ । त्यसैअनुसारका कुरा पनि हुँदा रहेछन्,’ उनले भने ‘ममाथि लगाइएका आरोपमा सत्यता छैन ।’
कारागार स्रोतले जेलरले कारागारका लागि उपलब्ध गाडीसमेत व्यक्तिगत प्रयोजनामा दुरुपयोग गर्ने गरेको बतायो । स्रोतका अनुसार कारागारबाट कैदीबन्दी ओसारपसार गर्न ना १ झ १५२८ र ९६० नम्बरको गाडी उपलब्ध भए पनि जेलर गौतमले १५२८ नम्बरको गाडी निजी साधनसरह प्रयोग गर्दैआएका छन् । उनले निजी काम र बिदाका बेलामा समेत सो गाडी लिएर हिड्दा कारागारमा असजिलो पर्ने गरेको छ । सोमबारमात्रै उनले आफ्नो व्यक्तिगत कामका लागि गाडी हेटौंडा पु¥याएपछि एउटा गाडीलाई बारा र पर्सा अदालतमा बन्दी ओसार्न हम्मेहम्मे भएको थियो ।
कारागारका कैदीको स्थानान्तरण पनि रकम दोहनको उपाय बनेको बताइएको छ । स्थानान्तरणका लागि कैदीहरुसित रकम बार्गेनिङ हुने गरेको छ । भनेजति नजराना बुझाउनेलाई अनुकुल कारागारमा पठाउने गरिएको छ । तर, पैसा नआउने भएपछि धुलिखेल कारागार पठाइनुपर्ने मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका कैदीको सरुवामा बेवास्ता हुँदै आएको छ । यो कारागारमा अहिले ७ जना यस्ता कैदीलाई हतकडी लगाएर राखिएको स्रोतले बताएको छ । धुलिखेलमा मानसिक रोगी कैदीको उपचारको व्यवस्था भए पनि रकमी खेलका कारण उनीहरुको सरुवा प्राथमिकतामा नपरेको स्रोतको दाबी छ । यो कारागारमा ५ सय ७५ कैदीबन्दीको क्षमता भए पनि अहिले १२ सय कैदी कोचेर राखिएको छ । तर, सरुवाको प्रक्रिया रकमी कमिशनमा रुमलिएको बताइन्छ । कैदीको सजाय माफीको सिफारिस पनि कारागार प्रशासनका लागि रकमी खेलको अचुक हतियार बन्दै आएको बताइन्छ । कारागार मर्मत र आन्तरिक सरसफाईका सामग्रीमा पनि कमिशनको चरम चलखेल भएको दाबी एकजना नाइकेले गरे । यतिसम्म कि कारागार प्रशासनले कुचोसमेत उपलब्ध नगराएका कारण अहिले कारगार र पसिरमा जताततै फोहोर थुप्रिएको उनले जानकारी दिए । Read 495 times	Last modified on Saturday, 29 October 2016 17:06	Tweet
« विर्ताका इन्स्पेक्टरको ज्यादति, तिहार खर्च नपाएपछि समातिएको सामान अनुसन्धानलाई बुझाए	‘स्वभिमानी वीरगन्ज, सबल मधेश’ अभियान सुरु »